“Hubi Dhiigaaga” iyo Shaqaalaha Golis. | Golis Telecom Somalia
“Hubi Dhiigaaga” iyo Shaqaalaha Golis.
Jaamacadda Bariga Africa iyo shirkadda Golis oo iskaashanaya ayaa fuliyay mushruuc ay ugu magac dareen “ Hubi DHigaaga” mashruuca ayaa ujeedkiisu yahay in la ogaado nooca uu yahay dhiigga shaqaalaha ka hawl gala shirkadda Golis.
Ujeedka mashruuca ayaa maamulka shirkaddu waxay ku sheegeen in uu yahay in la ogaado nooca dhiigga kaas oo wax badan tari doona shaqaalaha meel kasta oo ay joogaan.
Madaxa xafiiska shaqada iyo shaqaalaha Cabdulaahi Cabdi Shabeele ayaa sheegay in mashruuca “Hubi dhigaaga” natiijada ka soo baxdaa lagu qori doona aqoonsiga Shaqaalaha (ID-ga).
Wuxuuna yiri “ waa muhiiim in shaqaaluhu ogaado nooca dhiigiisa,waayo waxay u sahlaysaa in uu garan karo nooca dhiiigga markii looga baahdo”.
Shabeele ayaa hadalkiisa wuxuu ku daray “ waxaa sidoo kale suuragal ah in qof shaqaalaha ka mid ah shil ku yimaado,loona baahan karo in si deg deg ah dhiig loogu shubo,haddii aqoonsiga shaqaalaha la helo waxaa sahlanaanaysa in si dhaqsa ah dhiig loongu shubi karo”.
Madaxa shaqada iyo shaqaalaha ayaa sidoo kale sheegay in hawl galo kaloo caafimaad loo sameen doono shaqaalaha shirkadda,oo ay ka mid yihiin in la baaro cabirka indhaha iyo baaritaano kaloo muhiim u ah nolosha shaqaalaha shirkadda.